Namuhla, baningana eziningi abantu ngandlela-thile udinga ukubhekana umngcele, ngakho kufanele ufake isicelo se-visa. Kufanele kuqashelwe ukuthi eminye alazi mayelana umqondo ezifana "Visa". Ngiyavuma, kubalulekile ukuba siqonde impikiswano yini umbuso visa, futhi kungani uludinga.
Visa ngokuthi uphawu elenziwe ngesikhathi isikhundla noma yimuphi omunye emizimbeni ezikhethekile. Njengomthetho sinikezwa isitikha encane ukuthi Ulungise kuya iphasiphothi. Lokho-visa ikuvumela ukuba uhlale endaweni wamanye amazwe okwesikhathi esithile. Kufanele kuqashelwe ukuthi emnyango izivakashi sinquma injongo nokuhambela kwakhe visa kakhulu. Esimeni se-izinsolo kancane wokuvakashela kungenzeka inqatshelwe. Kodwa kukhona amazwe lapho ungakwazi ukuza ngaphandle visa. Ngokwesibonelo, amaRashiya ukufinyelela CIS amazwe ngaphandle leli phepha ukuze bangabhekani. Nakuba esanda iziphathimandla Ukrainian unolwazi ukuthi wethula umbuso visa izakhamuzi Russian.
Njengomthetho, umbuso visa kuyadingeka ukuze iqaphe imisebenzi wezinye izizwe ufika endaweni kwesinye isifunda. Njengoba sazi sonke, visa kungaba ngezinhlobo eziningi:
Ngaphezu kwalokho, kukhona ama-visa ezinjalo, okukuvumela ukuba ushintshe domicile. Ukuze usathola yokwemukela ukuvakashela izwe, isivakashi kumele uhlinzeke ngenombolo kwemibhalo kanye lesibawo elizalisiweko. Kufanele kuqashelwe ukuthi izakhamuzi abeza bevela emazweni wangaphambili CIS, akudingeki ukuba zidlule umbuso visa nge Russia. Lokhu kungenxa yokuthi izivakashi ezinjalo ukuvakashela leli isimo kudingeka ugcwalise ikhadi ukufuduka, okuyinto ekhishwe emngceleni.
Imibhalo ukuthola i-visa WaseRussia
Manje njengoba kusobala ukuthi visa ezinjalo, kubalulekile ukubhekana imibhalo ukuthi ziyadingeka uvakashele eRussia noma Ukraine. Uma udinga ukungena Insimu Russian Federation, isivakashi ubophekile ukuba aphathe uhlu kwemibhalo oluyokwenza naye ukuthola i-visa. Phakathi kwalezi asemthethweni izinto eziphawuleka kakhulu yilezi:
A lesibawo elizalisiweko;
iphasiphothi nazo zonke izithombe;
Ngaphezu kwalokho alien kumele kube ophethe isitifiketi, okufakazela khona kwanoma isiphi ezifweni ezidluliselwa ngobulili. Futhi, ukuthola i-visa udinga ukunikeza isithombe. Usayizi wesithombe kufanele kube okufanayo njengoba i-passport.
Ithola i-visa Russia
Lapho wonke amadokhumenti baye baqoqa, ungakwazi ukuqhubeka ukuthola i-visa langempela. Kufanele kuqashelwe ukuthi inqubo enjalo kuzovumela abantu bakwamanye amazwe kunalokho kudlule masinyane umbuso visa ne Russian Federation. Inqubo ayikanye ukuthi kunzima, uma konke uhlelo lesifanele. Ngakho-ke, kumelwe wazi ukuthi umbuso visa nokuthi yenziwa.
Isinyathelo sokuqala ukuba ababemenyelwe kulelo zwe. Kubalulekile futhi kakhulu:
ukhethe uhlobo visa, futhi lokho ngeke ngikwenze ngokugcwele injongo ukufika;
ukukhokha izimali ezimela;
Ukusetha usuku inthavyu ngesikhathi isikhundla.
Ngaphezu kwalokho, ngaphambi kokuya e-Russia, kuyatuseka waphinda ukuxhumana enxuseni futhi ukubuza mayelana emisha kungenzeka ukuthi kungaphazamisa emngceleni. Libuye efiselekayo bajwayelane imithetho, ezosiza ukuze bawele umngcele ngokuphepha. Kuyaphawuleka ukuthi zonke wezizwe owayeza endaweni Russian Federation ubophekile ukuba iqale ukubhalisa kufuduka endaweni lapho uhlala khona. Le nqubo kuyadingeka ngisho izakhamuzi abeza bevela emazweni wangaphambili CIS.
Intengo visa Russia
Yimbuyiselo visa ngowesinye isizwe kumele akhokhe izimali ezimela. Kuyinto ngokusebenzisa lo mnikelo abasebenzi ezimela afeze umsebenzi imibhalo ye Russian Federation futhi uma izivakashi kudingeka uchaze ukuthi siyini umbuso visa kuyini. Kuyaphawuleka ukuthi izindleko kulolu hlobo lweqoqo zingahluka. Ngokuvamile-ke kuncike kuzwe lapho isicelo se-visa, kanye nezinsuku, okuyinto edingekayo ukuze abulawe yayo.
Sekuyisikhathi eside iningi lamazwe eYurophu nase-Asia, intengo 35 Euro. Lokhu visa amasonto amabili. Uma udinga ukwenza i-visa esiphuthumayo, izindleko angavuka 70 euro, nesikhathi ukukhiqizwa kuzoncishiswa izinsuku ezintathu.
Umbuso visa nge Ukraine isekela impela eningi amazwe, ngakho ukuthola insimu yezwe kumelwe sithole ama-visa. Kumele kuqashelwe ukuthi le nqubo ukungena futhi imvume yokuba yisakhamuzi kulula kakhulu kunezinye endabeni visa Russia. Ukuze uqale inqubo, kufanele uxhumane embassy futhi ukunikeza iphakethe kwemibhalo. Phakathi imibhalo esemthethweni kumele kube khona:
ifomu Visa okungase ezithathwe yimuphi umnyango ezimela.
Iphasiphothi. Kulokhu, udinga ukuqinisekisa ukuthi ubuqiniso idokhumenti iphela ngemuva kwezinyanga eziyisithupha ngemva kohambo.
Ngaphezu kwalokho, kuyinto efiselekayo ukuthola ivawusha okufakazela ukubhuka ehhotela yokuhlala e-Ukraine.
Nazi izinhlobo visa isi-Ukrainian
Ngaphambi kokuvakashela Ukraine, kubalulekile ukuchaza injongo ukuvakashelwa. Lokhu kungenxa yokuthi zonke izinhloso ihlangabezana uhlobo oluthile visa. Ngaphezu kwalokho, imigomo uhlale incike indawo yezwe. Kuyaphawuleka ukuthi umbuso visa nge-Ukraine ngo-2014 kunzima kakhulu, ngakho-ke kuyadingeka ukuba bagcine yonke imithetho ukuthi kwakungekho ukungaqondi.
Uma travel ukuvakashela izihlobo noma abangane, kungcono ukuba ukhethe i-visa yangasese. Ukuze uthole it, ngaphandle iphakethe kwemibhalo udinga ukunikeza Yincwadi esimemo kusukela host. Kumele kuqashelwe ukuthi le ncwadi kumelwe ibe ngefomu koqobo. Ngakho-ke kungcono ukuthumela isimemo ku-imeyili. Umnikazi visa enjalo uzokwazi ukuhambisa kalula ezweni lonkana izinsuku ezingu-180.
Uma ukuvakashela Ukraine eyenziwa ngenjongo yenhlangano, kungcono ukukhipha i-visa ibhizinisi. Isisekelo lolu hlobo isixazululo isicelo wenza inhlangano aphethe, kodwa kulesi simo kuyinto okumelwe zigcinwe imithetho embalwa. Okokuqala, kumele inhlangano engokomthetho bhalisiwe ensimini ka-Ukraine. Okwesibili, iqembu ukumema kumele anikeze lenxusa ikhophi sokubhalisa, okuyinto anezinhlaka ku zonke izinkambiso umthetho-Ukraine. Emva kokuthola lale ivisa, isivakashi uzokwazi ukuhlala kuleli zwe unyaka owodwa.
Uma Ukuvakashela Ukraine kwenziwe ukuze ubone izinto yezwe, kuyinto efiselekayo ukukhipha-visa yokuba izivakashi. Ukuze bathole leyo mvume ukungena kwanele ukunikeza ivawusha okufakazela ukubhuka ehhotela. Ukuhlola lokhu visa kufikela kuzinsuku ezingu-180.
Kufanele kuqashelwe ukuthi naphezu kwakho konke izinguquko eziye zehlela umbuso visa ngo-2014, ukuthi banwebe isikhathi visa kungenzeka, ngaphandle kokushiya lonke, ngokwanele ukuba uvakashele lenxusa futhi isicelo se-visa.
Namuhla, abantu abaningi baseRussia umngcele ne-Ukraine ku imoto yangasese. Lokhu kwenziwa yilabo abanikazi imoto abaziyo ukuthi i-visa futhi ngokushesha indlela balidlulisele.
Ukweqa umngcele emotweni ngaphandle visa kumele uhlinzeke ngenqubomgomo eqinisekisa yomshuwalense icala civil. Kumele kuqashelwe ukuthi le dokhumenti, uma kunesidingo, angathengwa ngqo amasiko endaweni, kodwa kungcono ukuthatha ayinakekele kusengaphambili.
Okufakiwe baseRussia e-Ukraine
Namuhla, naphezu kokungavumelani ethile phakathi 'ohulumeni ababili, umbuso visa nge Ukraine Russia ayikahlanganiswa waqala ukusebenza, ngakho abantu bakula mazwe angahamba ukuvakashela ngaphandle nobunzima kakhulu futhi i-visa.
Qaphela ukuthi kusukela ngo-2007 inhloko Ukraine neRussia yasayina isivumelwano, okuyinto kuqinisekisa umbuso visa-free, ngakho ukuze bawele umngcele, kuzomele ube ipasipoti yangaphandle kwasekhaya. Uma uhambo Kwenziwa izingane, ngesikhathi umzali kokulawulwa Kumele unikeze isitifiketi sokuzalwa noma ipasipoti emincane uma ingane ifinyelele eminyakeni ethile. Kulezo zimo lapho ingane kweqa umngcele ngaphansi kokuqondisa kumuntu wesithathu noma bebodwa, ukuthi kumele anikezwe iphepha lapho abazali enikeza imvume yokuba le ukuqaliswa kwe-uhambo.
Manje Ukraine uyoletha umbuso visa izakhamuzi isiRashiya, kodwa amasiko lucwaningo umsebenzi walo ngaphansi imithetho efanayo. AmaRashiya kungaba usiphathe yonkana izinto umngcele abiza awufiki inani 200 Euro. Uma zokuthutha kungaphansi izimpahla indivisible, senani ngokuba ukuqaliswa zokuthutha inkinga-mahhala kufanele kube kungekho kuka-euro angu-300. Amaqembu elandelayo kwezimpahla kwamanye amazwe ngaphandle kokukhokha komsebenzi:
1 L likagologo;
2 amalitha iwayini;
200 amagremu ugwayi;
5 l ubhiya.
Kepha ukudla, bayazibuza nje ukuthi lingakhishwa kwenzeka ukuthi sum yabo ingeqi Euro 50. izakhamuzi Russian kungaba ngaphandle nzima kakhulu ukuthutha inani $ 10 000. Uma kukhona isidingo inani elikhulu, kufanele ukhathazeke ukutholakala kwemibhalo ezingaba ukuqinisekisa umthombo ivelaphi obakhathalelayo. On amakhadi epulasitiki e-Ukraine, izivakashi zivunyelwe ukuba baphathe ngokuphelele nganoma yisiphi isamba, kodwa uma lidlula 50 000 zamaRandi kuwufanele kusengaphambili ukuze uthole imvume National Bank of Ukraine.
Indlela ukushintsha ipasipoti eminyakeni 45 - igxathu negxathu Umhlahlandlela
Indlela ahlele ingane yesibili dolobha kamama?
Ukuhumusha Isikhathi: Esikhathini Esidlule Nanamuhla
Passport eyebiwe - ukuthi yenzeni, lapho ukuya khona? izitatimende Sample emaphoyiseni ngalokhu kwebiwa
MPP: into, umqondo, izimiso. umthetho Modern ngamazwe yangasese
Endalini yomphakathi: isaziso, ukuziphatha. endalini Public ezikweletini. Ukuthengiswa kwempahla ashaqe
"B-52" - I-USA webhomu. Umlando sokudalwa
Mangup Kale: kanjani lapho? Mangup Kale - isithombe
Rocking Oil: kudivayisi isiqu. imishini Oilfield
Imithombo yemvelo hydrocarbon: izici jikelele kanye nokusetshenziswa
Kungakanani mercury e thermometer: amabhola amagremu kanye
Car ama "Philips"
Ukusinda ku Amalungelo ihlathi: ukuqeqeshwa okuyisisekelo
Osteochondrosis wesibeletho. ekwelapheni lesi sifo
Monoblock Acer Aspire ZS600: izici kanye nokubuyekeza
Umhlaba Ocean Museum: isithombe Imodi